Sei zvichikosha kuenda kuchechi? Discover Online ▷ ➡️
Sei zvichikosha kuenda kuchechi?. Chechi ndiyo nzvimbo inosangana maKristu kuti vadzidze zvakawanda nezveIzwi raMwari uye nekukurudzirana. Iyo inzvimbo yakakwana yekusangana nevanhu vari kutsvaga Mwari kuburikidza naJesu.
Vatendi vazhinji vanotenda kuti hazvina basa kuenda kuchechi kuti ufambe nenzira yekutenda. Zvisinei, izvi zvinoitika nekuti havazive chirevo chechokwadi cheKereke. Neichi chikonzero isu tine, kubvira chemada.online, takafunga kuti zvakakodzera kutsanangura kuti chii Chechi uye nei zvakakosha kuenda kwachiri.
Ngatisarega kuungana sezvakajaira vamwe, kana tisingakurudziri, totonyanya kuona zuva iri roswedera.
1 Chii chinonzi chechi?
2 Sei zvichikosha kuenda kuchechi?
2.1 1. Chechi muviri waKristu
2.2 2. Inobatsira kubata nemavara edu
2.3 3. Inokubatsira kukura pamweya
Chii chinonzi chechi?
Chechi iunganidzwa wevanhu vese vanoda uye vanotevera Jesu. Bhaibheri rinodaidza Kereke kuti muviri waKristu. Mutendi wese inhengo yemuviri iwoyo. Muna Kristu vatendi vese vakabatana uye havagone kupatsanurwa. Kana waponeswa, wakabatanidzwa neChechi yese. Chechi iri zvakare chero nzvimbo inoumbwa nhengo dzeChechi yaKristu kuti vanamate Mwari mukudyidzana.
Nesuwo tiri vazhinji, tinoumba muviri mumwe muna Kristu, uye mutezo mumwe nomumwe wakabatanidzwa nemimwe yose.
VaRoma 12: 5
Pamberi pekereke, paive nemasinagogi, dzaive nzvimbo kupi VaJudha vakaungana kuzorumbidza Mwari uye dzidzai zvakawanda nezve magwaro pamwechete. Jesu aienda kumasinagoge nevadzidzi vake, achitipa muenzaniso.
Mushure mekumuka kuvakafa uye kukwira kwaJesu, iyo vadzidzi vakatanga kusangana nguva nenguva vachirumbidza Mwari uye dzidza sezvavaimboita mumasinagoge. Vakatanga nekusangana muchivanze chetemberi uye mudzimba dzavo, ipapo munzvimbo hombe kana vaine nhengo zhinji. Aya ndiwo mamirire akaita kereke sezvatinozviziva nhasi.
Havana kumira kusangana mutembere kwezuva rimwe chete. Paimba neimba vaimedura chingwa uye vakagovana chikafu nemufaro uye nerupo.
1. Chechi muviri waKristu
Chechi Mutumbi waKristu. Hapana nhengo yemuviri inokwanisa kurarama yega, isina muviri wese. Uchida kana kuti kwete, vanhu vari mukereke imhuri yedu uye tinofanirwa kudzidza kugara navo (kunyanya sezvo tichizogara navo nekusingaperi).
Kunyange ziso harigone kuti kuruoko: Ini handidi iwe, kana musoro kugunwe: handinei newe
Asi, nhengo dzemuviri dzinoita sedzisina kusimba ndidzo dzinonyanya kukosha.
1 VaKorinde 12: 21-22
2. Inobatsira kubata nemavara edu
Hapana muchechi akakwana, kunyangwe mufundisi. Mupositora Petro pachake akakanganisa semutungamiri mukereke yekutanga. Chechi haina kumbobvira yave nzvimbo yevanhu vakakwana. Mwari vakaraira Chechi kuti iungane kuzotarisana nekusakwana kwedu.
Rugare rwaKristu ngarutonge mumoyo yenyu, ndirwo rwamakadanirwa mumuviri mumwe. Uye tenda. Shoko raKristu ngarigare mamuri nokufuma kwose kwaro; Imbai mapisarema, nziyo, uye nziyo dzemweya kuna Mwari, nekutenda kunobva pamoyo.
VaKorose 3: 15-16
3. Inokubatsira kukura pamweya
Nhengo dzechechi dzinobatsira, kukurudzira, kunyaradza, kutsiura, kudzidzisana murudo rwaMwari. Havawanzozviwana zvakanaka, asi inzira yekudzidza pamwe chete. Tinokura zvakanyanya pamweya kana tiri pamwe chete sekereke pane kana mumwe nemumwe ari ega.
Asi tichitevera chokwadi murudo, ngatikurei pazvinhu zvose muna iye musoro, ndiye Kristu. kubva kwaari muviri wose, wakanyatsorongeka nokubatanidzwa pamwe chete nemitezo yose inobatsira mumwe nomumwe maererano nebasa romumwe nomumwe unogamuchira kukura kwawo kuti uzvivake murudo.
VaEfeso 4: 15-16
Iko hakuna kunetseka kuve neimba yekukereke, asi kana paine vanhu vazhinji zvinova zvisingaite. Kune imwe nhamba yevanhu, zvakanaka kuva nenzvimbo hombe yekusangana nguva dzose. Chimiro chakarongeka chechechi chinobatsira kuronga mapoka akakura. Chii chimwe, Kereke inzvimbo inooneka panogona kupinda chero munhu kubva mumugwagwa asina kukokwa.
Tinovimba unonzwisisa izvozvi sei zvakakosha kuenda kuchechi. Tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoodza mwoyo pavanoona mufundisi kana imwe nhengo mafungiro asiri echiKristu. Zvisinei, ndizvo Zvakakosha kuti usakanda mapfumo pasi uye ubatsire vamwe kuwana nzira yaJesu. Ramba uchifunga kuti nhengo dzechechi vanhu vane hurema hwavo uye hunhu hwavo senge iwe, nekudaro, nzira yakanakisa yekuvaka Mweya waMwari ndeyekubatana muChechi.
Tinovimba chinyorwa ichi chakabatsira iwe. Kana uchida kuziva kuverenga sei bhaibheri kuti urinzwisise. Tinokurudzira kuti uenderere mberi nekuvhura Ziva.online.